Snapseed inovandudzwa yeIOS ichiwedzera chishandiso chitsva: makakombama | IPhone nhau
MuApp Store tinokwanisa kuwana huwandu hukuru hwezvishandiso zvinotibvumidza kuti tigadzirise mifananidzo yedu kugadzirisa mhedzisiro kune zvataizoda, asi izvo nekuda kwekumhanya kana mamiriro ekupfura, hatina kukwanisa kuwana. Imwe yeaya anoshandiswa ndeye Snapseed, chishandiso icho Google chinotarisira zvakanyanya uye chinogara chichigadzirisa. Vakomana vanobva kuMountain View vangoburitsa chigadziriso chitsva kuapp iyi na basa idzva rinonzi macurves pamusoro pekuvandudzwa kwakasiyana kuyedza kugonesa vashandisi avo vanosarudza kushandisa mamwe mapurogiramu ekugadzirisa mapikicha.
Iyo huru yekufungidzira iyo yakakwenenzverwa yekuvandudza nhamba 2.15 inounza kwatiri ine hukama nebasa idzva rinonzi macurves Kana iwe uchiwanzo gadzira mapikicha nemamwe desktop desktop kana kubva ku iPhone kana iPad, zvirokwazvo unoziva iri basa iro inotibvumira kugadzirisa kupenya, ruvara uye matauriro emifananidzo. Asi pamusoro pezvo, inotipa akasiyana presets ayo anoongorora mufananidzo kuti atipe mhedzisiro inokodzera mhedzisiro yatiri kutsvaga.
Snapseed yakagadziridzawo algorithm yekuona kumeso, nenzira iyi zviri nyore kwazvo kuchishandiso pamwe neyakareruka, ichiona chete kumeso kubvisa kumashure. Kana isu tichida kugadzirisa zvatakatora nemagwaro, iyi yekuvandudza yakawedzera sarudzo ku wedzera mitsara mitsetse mune akawanda-mutsara mavara masitaera, sarudzo inotarisirwa zvakanyanya nevashandisi asi iyo Google yanga isati yasarudza kuita.
Kupedzisa ruzivo rwekupedzisira tinoriwana kana tichishandura mufananidzo kuita mutema nemachena, kunyanya kana pfuti yakatorwa mune yakaderera mwenje, iyo tsanga imwe chete inomira pamusoro pezvose, asi neichi chiitiko, iyo tsanga yakasvibiswa, ichibvisa mufananidzo mukuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Snapseed inovandudzwa yeIOS ichiwedzera chishandiso chitsva: makakombama
Izvo hazvizobvutwa here?
chokwadi. Ndatenda nekunyora.
Iyo Apple Watch yakaputsa yayo yenguva-yekutengesa rekodhi mukati mekota yekupedzisira